Shilalekha » दोस्रो बजारमा ६ लाख सक्रिय लगानीकर्ता, कुन ब्रोकर कहाँ कति ? दोस्रो बजारमा ६ लाख सक्रिय लगानीकर्ता, कुन ब्रोकर कहाँ कति ? – Shilalekha
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १७:५७
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संख्या ६ लाख नजिक पुगेको छ । शुक्रबार नेप्सेले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ अनुसार शेयरबजारको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संख्या ५ लाख ९४ हजार पुगेको छन् ।
नेप्सेले पछिल्लो १२ दिनमा करिब ७० हजार अनलाईन प्रयोगकर्ता बढेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
फागुन मात्र कति थपिए अनलाइन प्रयोगकर्ता ?
फागुन ९ गतेसम्म ३ लाख ७६ हजार २६१ अनलाइन प्रयोगकर्ता रहेकोमा फागुन २० गते ५ लाख ४५ हजार ५३५ पुगेको छ। यस अवधिमा मात्रै अनलाइन कारोबारको लागि युजर र पसवर्ड लिनेको संख्या १८।३६ प्रतिशतले बढको हो।
यस अवधिमा सगरमाथा सेक्युरिटीजको अनलाइन प्रयोगकर्ता सबैभन्दा धेरै ३१।३७ प्रतिशत बढेको छ। यस अघि ५९३ रहेको अनलाइन प्रयोगकर्ता बढेर ७७९ पुगेका छन्।
सबैभन्दा धेरै युजर र पासवर्ड वितरण गर्ने ब्रोकर ?
अनलाइन कारोबारको लागि सबैभन्दा धेरै युजर र पासवर्ड वितरण गर्नेमा भने नासा सेक्युरिटीज रहेको छ। फागुन ९ गते सम्ममा नासाले ३६ हजार ३२७ जनालाई अनलाइन कारोबारको लागि युजर र आईडी वितरण गरेको नेप्सेको तथ्यांक छ। पछिल्लो १२ दिनमा नासाबाट अनलाइन युजर र पासवर्ड लिनेको संख्या १५।३५ प्रतिशतले बढेर ४१ हजार ९०२ पुगको छ।
दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने सक्रिय लगानीकर्ता कति ?
दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने सक्रिय लगानीकर्ताहरुको संख्या पनि ६ लाख नजिक पुगेको छ। नेप्सेले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हाल सक्रिय लगानीकर्ताहरुको संख्या ५ लाख ९४ हजार ८७९ पुगेको छ। पछिल्लो १२ दिनमा सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या भने ८।०८ प्रतिशत अर्थात ४४ हजार ७४० जना बढेका छन्।
सबैभन्दा धेरै सक्रिय क्लाइन्ट कुन ब्रोकरसँग ?
कुन ब्रोकरसँग कति क्लाइन्ट ?